शेयर बजार - के तपाई शेयर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तयारी हुनुहोस् शेयर हाल्न !
कतार विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने | चुनावी परिणाम सुन्दा भारतमा कांग्रेस नेताको हृदयघातका कारण मृत्यु | मिडिया विधेयक संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप हुनुपर्छ : गौतम | गैरन्यायिक नागरिक हत्या गरेको विषयमा १३ गते विप्लवकाे नेपाल बन्द । | के तपाई शेयर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तयारी हुनुहोस् शेयर हाल्न !
के तपाई शेयर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तयारी हुनुहोस् शेयर हाल्न !
काठमाडौं । के तपाई शेयर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए तयारी हुनुस १६ वटा कम्पनीहरु शेयर निष्काशन गर्ने तरखरमा छन् । दुई वटाले आगामी साता शेयर निष्काशन गर्दैछन् भने १४ वटा कम्पनी धितोपत्र बोर्डको अनुमतिको पर्खाईमा छन् ।समग्रमा १६ वटा कम्पनीको कुल दुई अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपेयाँ बराबरको साधारण सेयर 'आईपीओ' आउँदैछ । इन्फिनिटी माइक्रोफाइनान्सको ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जेठ १३ देखि खुल्दैछ भने १४ गतेदेखि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले १६ लाख कित्ता आईपिओ आयोजना प्रभावितका लागि खुला गर्दैछ ।	थप पढ्नुहोस्
७ वर्षमा ५५% लाभांस प्रक्षेपण सहित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ को आज सार्वजनिक निष्काशन
काठमाडौं। सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ ले आजदेखि दश करोड इकाई निष्काशन गरेको छ। फण्डले दश करोड इकाईमध्ये एक करोड ५० लाख योजना व्यवस्थापकको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरेको हो। सिविआईएल क्यापिटलले व्यवस्थापन गरेको यो दोस्रो म्युचुल फण्ड हो। सर्वसाधारणले न्युनतम १०० इकाई र अधिकतम दुई करोड इकाइसम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने छन्। फण्डले छिटोमा जेठ १३ गतेसम्म निष्काशन बन्द गर्ने छ। यदि पहिलो चरणमा बिक्री नभएमा ढिलोमा असार ८ गतेसम्म निष्काशन गर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भीड, हाइड्रोमा आयो उछाल
काठमाडौं। शेयर बजार घटेर ब्रोकर कार्यालय जान छाडेका लगानीकर्ता यतिबेला भने ब्रोकर कार्यालय धाउन थालेका छन्। अहिले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढ्न थालेको हो। अधिकांश ब्रोकर कार्यलयमा लगानीकर्ताको भिडभाड देखिन थालेको छ। प्राविधिक विश्लेषहरुकले शेयर बजारको वियरिस ट्रेण्ड सकिएको विश्लेषण गरेसँगै लगानीकर्ता बजार प्रवेश गरेका हुन्। लगानीकर्ताको चाप बढ्न थालेसँगै पछिल्ला दिनमा कारोबार रकम पनि बढ्न थालेको छ। नेप्से सूचक ११०० को लाइनबाट सुधार हुँदै गर्दा बाणिज्य बैंकको शेयरमा उछाल आएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
सहकारीको पैसा र ऋण गरेरै शेयर किन्दै लगानीकर्ता, दोस्रो बजारमा लगानी बढ्यो ।
काठमाडौं। शेयर बजार लगातार बढ्न थालेपछि लगानीकर्ताले सरसापट(ऋणपान) गर्दै दोस्रो बजारमा लगानी बढाउन थालेका छन्। बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी र आफन्तसँग रकम जुटाएर दोस्रो बजारमा लगानी बढाउन थालेका हुन्। यही कारण अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार रकममा बृद्धि देखिन थालेको छ। मंगलबारसम्म बजार मापक नेप्से सूचक २१२ अंकले बढिसकेको छ। गत फागुन १९ देखि शेयर बजार लगातार बढ्दो क्रममा रहँदा सूचक १३१२.१४ अंकमा उक्लिएको हो। लगानीकर्ताहरूले दोस्रो बजारमा सक्रियता बढ्दा दैनिक एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
कतार विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले नै ...
सेप्टेम्बरमा ‘आकस्मिक निर्वाचन’ ...
भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान अब नो ...